Help - Ningbo Taili Bonus Import sy Export Co., Ltd.
Tonga eto isika mba HANAMPY
Afaka manao OEM & ODM?
Eny, isika hiatrehana Original Fitaovana Manufacturing sy Original Design Manufacturing ho an'ny mpanjifa teo amin'ny fangatahana. Raha ny mba Mety tsara be dia be, dia afaka mampiditra ny marika, anisan'izany ny Logos, na manova ny lamba na ny ara-nofo mba hihaona ny fepetra arahana. Dia hiasa miaraka aminareo hanao ny mari sy famokarana vokatra izay namboarina mba hifanaraka amin'ny zavatra ilaina.
Mandra-pahoviana no fandefasana handray?
Shipping fotoana dia mitovy arakaraka ny toerana misy anao:
S. baiko haka 3-5 raharaham-barotra ho an'ny mazava andro fanaterana
Eoropa baiko haka 1-5 raharaham-barotra andro hamonjy
Iraisam-pirenena hafa baiko haka 6-20 raharaham-barotra andro hamonjy
Tombanana ho TIME
Hetra / ANJARA ASANY
Etazonia FedEx na USPS (Signature mety ho ilaina) 3-5 Business Days Voaheloka ihany Ao amin'ny CA & PA
Kanada USPS laharam-pahamehana sy Kanada Post 5-15 Business Days Nandidy By Country
Vondrona Eoropeana (EU) DHL Express * / GLS 1-5 Business Days Voaheloka VAT Upfront
International USPS laharam-pahamehana / DHL Express * / Hong Kong Post Speedpost 6-20 Business Days Nandidy By Country
Mampiasa ny DHL isika ankehitriny toy ny fandefasana vaovao mpamatsy. Iraisam-pirenena indrindra dia izao no baiko avy amin'ny trano fanatobiana entana nalefa any Hong Kong na Holandy (toy ny isan-misy tahiry), izay indrindra ny fandefasana expedite fotoana noho ny filaminana.
Filaharana iraisam-pirenena: Tamin'ny fotoana tena tsy fahita firy, fandefasana entana iraisam-pirenena ny firenena sasany afaka 4-8 herinandro na ela kokoa noho ny sasany miadana-to-tsambo firenena toa an'i Aostralia, Brezila, Meksika, ary Romania. Isika tsy tompon'andraikitra misy fahatarana vokatry ny fomba amam-panao firenena toerana fangatahany fahazoan-dalana dingana.
Territories ny Etazonia: Ho an'ireo izay monina ao amin'ny faritanin'i Etazonia fa an-tsambo ho any, azafady mamela na aiza na aiza eo amin'ny 5-15 andro noho ny raharaham-barotra mba ho tonga amin'izay halehanao.
Ahoana no misafidy ny tsara stroller?
Arakaraka ny zavatra ilaina, dia manolotra stroller maro karazana. Afaka misafidy avy isan-karazany ny zavatra toy ny pram ho an'ny zaza vao teraka, tsotra takatry ny voalamina tsara stroller, iray amin'ireo avo-end lafo vidy strollers, na tanteraka stroller Travel napetraka izay ahitana ny stroller, fiara seza, ary feno tsipika ny Accessories, toy ny kitapo diaper, kapoaka mpihazona, fiara seza adaptatera, mitondra fandriana, ary lay aro moka.
Ve ato aminareo misy kalitao certifications?
Eny - EN voamarina isika hahafantatra ilay fitsipika fiarovana avo indrindra.
Manana fanontaniana? Lehibe. Eto isika mba hanampy anao 7 andro isan-kerinandro, ary mamaly ao anatin'ny 24 ora. Plus, dia afaka mahita ny tena valin'ireo fanontaniana marina eto amin'ity pejy ity.
Dia hamaly ny mailaka fotoana fohy!